Akhriso: Taariikh Nololeedka 11-ka Murashax Ee Guddoomiyaha Golaha Shacabka – Goobjoog News
Akhriso: Taariikh Nololeedka 11-ka Murashax Ee Guddoomiyaha Golaha Shacabka
Isniinta waxaa magaalada Muqdisho lagu wadaa in golaha shacabku ku doortaan guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka, jagadaasi waxaa hadda u taagan ilaa 11 murashax.
Haddaba, Goobjoog News, waxaa ay akhristayaasheeda u soo gudbineysaa taariikh nololeedka 11-ka murashax ee u taagan tartanka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 10aad.
1. Ibraahim Isaaq Yarow, waxaa uu ku dhashay Baydhabo, 1972, isaga oo waxbarashada sare isla Baydhabo ku qaatay, Jaamacadda darajada 1aad ee Naitobi , darajada 2aad UK, London isaga oo bartay culuumta Istaariijida kheydaarka aadanaha, waxaa uu Xildhibaan ahaa 18 sano min 2000-2017, waxaa uu qeyb ahaan 5 baarlamaan, 5 madaxweyne ayuu doortay, 12 ra’irsul wasaare ayuu anisixyay, wasiiro ka noqdar dhowr wasaaradood., guddiga golaha shacabka.
2. Idiris Cabdi Dhakhtar: Waxaa uu ku dhashay Baydhao 1965-tii, Jaamacadda Lafoole ayuu darajada koowaad ka qaatey kuliyadda beeraha, wasiirka beeraha ayuu ka noqdey maamulka koofur galbeed, waxaa uu madax ka noqdey Jaamacadda Upper Jubbba, waana milkiilaha Jaamacadda Kheyre ee magaalada Baydhabo.
Waa xubin ka tirsan baarlamaanka 10aad, waa markii 2aad uu jagadan u tartamayo, sanadkii hore waxaa ka adkaaday Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
3. Cali Sheekh Maxamed Nuur, waxaa uu ku dhashay W/weyn 1962dii, xagga waxbarashada waxaa uu heystaa shahaadada 1aad ee sharciga ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed iyo Master uu ku sameeynayo diblomaasiyadda isaga oo dhigta jaamacadda Nairibi.
Waxaa uu xildhibaan noqday 2004-2018, waxaa uu sidoo kale ka mid ahaa xukuumado badan sida kuwii TFG-da iyo xukuumadda federaalka ah: Todobaadkii hore waxaa uu iska casilay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo federaalka, waxaa uu horay u soo noqday wasiir ku xigeenka hawlaha guud iyo dib udhiska, gaadiidka, dekadaha iyo Tamarta, wasiir ku xigeenka cadaaladda.
4. Cabdi Casis Xasan Maxamed(Lafta-Green), waxaa uu bartay culuum kala duwan sida culuumta siyaasadda ee jaamacadda ONEIDA oo Mareykanka ah iyo shahaadooyin kale oo ku saabsan maamulka, maareynta iyo dib uheshiiisiinta.
Waxaa xubin ka ahaa baarlamaankii 8aad iyo midkan 10aad, 5tii sano ee ugu dambeysay waxaa uu noqday wasiiru dowle ka noqday wasaaradda ganacsiga, wasiir ku xigeenka kaluumeysiga, wasiiru dowlaha warfaafinta isaga oo dowladihii KMG ahaa ka noqday sida dowladii Sheekh Sharif wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka dekadaha iyo dowladii Cabdulahi Yusuf uu ahaa wasiirka dekadaha, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka maaliyadda.
5. Saalim Caliyow Ibrow, waxaa uu ku dhashay Qoryooley 1944tii, waxaa uu bartay beeraha iyo xoolaha isaga oo shahaado ka heysta La Trobe University of Melbourne, Australia iyo Jaamacadda Turin ee Talyaaniga.
Waxaa uu Xildhibaan ka noqday baarlamaankii KMG ahaa ee 2004tii iyo baarlamaanka 10aad, Todobaadkii hore waxaa uu iska casilay wasaaradda Tamarta, isaga oo horay u soo noqday wasiirka xannaanada xoolaha, wasiirka cadaaladda, sii-hayaha ra’isul wasaaraha ee xilligii Cabdulahi Yusuf, wasiirka tacliinta sare, Xannanada xoolaha, maaliyadda, waxaa uu kale uu dowladda Cabdiqaasim ka noqday wasiir ku xigeenka xannaanada xoolaha iyo wasiiru dowlaha isla wasaaraddaas.
6. Sheekh Aadan Maxamed Nuur, waxaa uu ku dhashay Xudur 1956-dii, waxaa uu heystaa Diploma dhanka shareecada ah, waaa xubin ka tirsan baarlamaanka 10aad, waxaa uu sidoo kale ku jiray labadii baarlamaan ee ka horeeyay.
Sheekh Aaden waxaa 2007-2008 ahaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka KMG ah, 2008diina isagaa ahaa sii-hayaha madaxweynaha, waxaa uu 2004-2007 ahaa wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta. Sheekh Aadan Maxamed Nuur waxaa uu ka mid ahaa SRRC iyo aasaasayaashii RRA.
7. Dr. Sharif Sheekhunaa Maye, waxaa uu ku dhashay Baraawe 1941, waxaa uu ka baxay kuliyadda sharciga ee Jaamacadda umadda Soomaaliyeed, Machadka sare ee booliiska Roma, isaga oo wax ka bartay sharciyada maaliyadda, dhaqaalaha, barista dambiyada, ka hortagga falalka argigixisada/
2011-2013kii waxaa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaa uu horay u soo noqday taliyaha ciidanka ilaalinta canshuuraha iyo ilaalinta ugaarta ee Kismaayo, taliyaha ciidamada ilaalinta canshuuraha ee Banaadir, taliyaha saldahiga booliiska Berbera, taliyaha qeybta booliiska Sanaag, taliyaha qeybta booliiska EE Jowhar iyo madaxa laanta barista ee hoggaanka barista dambiyada ee Muqdisho.
8. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan: Waxaa uu ku dhashay Baydhabo 1957, waxbarashada dugsiga sare waxaa uu ku qaatay Sheekh Aweys ee Baydhabo isaga oo cilimiga bulshada ka bartay Jaamacadda culuumta iyo Tiknoljiyadda ee Yemen 2014kii.
Todobaadkii hore waxaa uu iska casilay wasiirka gashaandhigga, waxaa kale uu horay u soo noqday wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha, Safiirka Soomaaliya ee Turkiga, wasiirka hantida qaranka iyo qalabeynta, waxaa uu Xildhibaan ahaa 2009-2011-kii isaga oo dib u soo noqday baarlamaanka 10aad.
9. Sharif Maxamed Cabdalla Xuseen: waxaa uu Baydhabo ku dhashay 1954tii, waxaa uu ka qalin jabiyay Jaamacadda umadda kuliyadda daraasaadka Islaamka.
Waxaa uu ka mid ahaa baarlamaankii 2000-2004tii, baarlamaankii 9aad iyo weliba midkan 10aad, waxaa uu ka tirsan yahay guddiga horumarinta adeegga bulshada golaha shacabka.
Waxaa muddo dheer ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada rayidka, nabadeyn, adeeg caafimaad iyo daryeel agoon ayuu ka shaqeeyay, sidoo kale waxaa uu ahaa maamule ardey badan soo saaray iyo xubin ka tirsan aasaasayaashii FPENS.
10. Maxamud Macalin Yaxye, waxaa uu ku dhashay Tiyeglow 1974, waxaa BA ka heystaa jaamacadda Muqdisho iyo Master oo culuumta siyaasadda ah Jaamacadda Astrolabe ee Turkiga.
Waxaa xubin ka mid ah baarlamaanka 10aad, 2017 waxaa loo magacaabay guddoomiyaga guddiga xeer-hoosaadka, anshaxa, xasaanadda iyo daryeelka xildhibaannada.
Waxaa uu horay u soo noqday wasiiru dowlaha arrimaha gudaha, wasiir ku xigeenka horumarinta adeegga bulshada.
Maxamud Macalin Yaxye waxaa uu ka tirsanaa baarlamaankii 2009-2012, xubin ururka ARS, ka hor waxaa uu ahaa Macalin ka shaqeeyay dugsiyo kala duwan 1994-2003dii.
11. Iman Cabdulahi Cali, waxaa uu ku dhashay Baydhabo 1954tii, waxaa uu bartay jaamacadda umadda qeybta xisaabaadka ee SIDAM halka Master uu ka diyaariyay Finafrican foundation oo Talyaaniga ah.
Xaggga shaqada waxaa uu ka soo shaqeeyay bangiga horumarinta Soomaaliyeed, Talyaaniga, 2016 waxaa uu ka mid noqday golaha shacabka ee baarlamaanka 10aad, waxaa kale uu sidoo kale ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Kheyre.
Xuquuqda Qoraalka Waxaa Leh Goobjoog News, Lama Qaadan Karo Xigasho La’aan.
Trump Oo Si Rasmi Ah U Noqdey Madaxweynaha 45aad Ee Mareykanka
New Ucid oo Ku Biirtay Xisbiga Kulmiye
Faah Faahin: Dagaal Ka Dhacay Degmada Kaaraan Ee Magaalada Muqdisho
Gudi u taagan xalinta xiisad ka jirta Cabudwaaqo oo ka hadlay halka ay wax u marayaan (Dhageyso)
Amoxicillin Generique 20mg Medicina Propecia [url=http://drugs2k.net]cialis generic[/url] Cialis Pharmacy Online Viagra Levitra Et Cialis Propecia Hpb
generic viagra india buy viagra uk quick delivery levitra for sale in canada
cheap viagra to canada cialis tolerance can you order cialis online for canada
Leave a Reply to wrosque Cancel reply
Madaxweyne Xasan ‘’Weriye Cawke Waxa Uu Ahaa Nin Wax Weyn Soo Qabtey, Taariikhda Dalkana Baal Dahab Ah Ka Galey’’
honest distribution [url=http://viacheapusa.com/#]generic vi...